Igumbi 09 l ibhedi yokumkani - I-Airbnb
Igumbi 09 l ibhedi yokumkani
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguMiguel Ángel
Kukusekwa kweehektare ze-8 zeendawo eziluhlaza, apho unokubona khona amabala ezemidlalo, imidlalo yabantwana, indawo yokubhukuda, ihlathi kunye nezityalo zekofu, ukubukela iintaka ngendlela yendalo kunye neemitha ezingama-300 ukusuka kwiindawo zokuhlambela ezishushu zesixeko saseMOYOBAMBA.
Indawo ibekwe 2.5 km ukusuka kwisixeko MOYOBAMBA, ibe phezu imiphetho umsindo befuna aloo mzi, owayamene ihlathi ukhuseleko Rumiyacu yeehektare 2800 ephethwe ngurhulumente kodwa zingafumaneka ngaphandle isithintelo kunye kunye Kule Indawo enamasimi ekofu aphantsi kweFundo Alegría.
I-Fundo Alegria ikude umzi, malunga 2.5 yeekhilomitha ukusuka kwisixeko MOYOBAMBA, akukho izakhiwo ezikufutshane, yinto isithuba esivulekileyo ka-80 amawaka square metres kwaye Rumiyacu ehlathini kunye lwengoma indlela ngeenxa zonke kuyo. Elivulela edolophini yaseJepelacio
Sikhonze iindwendwe kunye namagumbi ecocekileyo kwaye kucocekile, kunye free Wi-Fi ukufikelela, amanzi ashushu nabandayo, Regional kunye nokutya fusion kunye nokutya unique ngamazwe kwi San Martín Region, sinikezela kuphela iintlanzi umlambo ahlambulukileyo iziphungo kuphela iziqhamo lommandla ezifreshi walungisa nangoko .
Sikhonze iindwendwe kunye namagumbi ecocekileyo kwaye kucocekile, kunye free Wi-Fi ukufikelela, amanzi ashushu nabandayo, Regional kunye nokutya fusion kunye nokutya unique ngamazw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Moyobamba